Fehezanteny Hoe ‘Praiminisitra Vendrana’ Nosivanina Tamin’ny Fanadinana Taranja Teny Grika · Global Voices teny Malagasy
Fehezanteny Hoe ‘Praiminisitra Vendrana’ Nosivanina Tamin'ny Fanadinana Taranja Teny Grika
Nandika (en) i Sophia Haldaiou
Voadika ny 12 Jona 2017 5:06 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Português, Español, Deutsch, Ελληνικά
Ministeran'ny Fanabeazana Grika. Sary avy amin'ny Wikimedia Commons.
Toa nahafanimpanina ny rehetra ny fihetsika iray kidaladala hafa nataon'ny governemanta SYRIZA ao Gresy ety am-panombohan'ny sekoly ny fialantsasatry ny fahavaratra.
Volan'ireo Fanadinana Nasionaly any amin'ny ambaratonga faharoa rehetra manerana ny firenena ny Jona. Tamin'ity taona ity, ny 6 Jona, ireo mpiadina avy amin'ny Sekoly Ambaratonga Faharoa Fianarana asa (EPAL), tonga hiatrika ny fanadinana nasionaly, taranja Teny Grika Maoderina, dia notolorana dika nasiana fanovàna avy amin'ny lahatsoratra tena izy nosoratan'i Georgios Theotokas mba hanomezan'izy ireo valinteny.
Theotokas dia endrika iray fantadaza teny anivon'ireo “Grika Zanaky ny andian-taona Telopolo”, andiana mpanoratra, poety ary filaozofy neken-teny ary nitondra fiovàna nahery vaika teo amin'ny literatiora Grika.
Mivaky toy izao ny fehezanteny tena izy ao anatin'ilay boky andrana “Eritreritra sy Famakafakàna” (1956) nataon'i Theotokas’:
Ny mpandrafitra iray mendrika, izay mahalàla tsara ny asany ary mino izany, dia olona iray feno tanteraka sy mendrika haja miohatra noho izay mpitahiry tombokasem-panjakana marenina na Praiminisitra vendrana.
Saingy nasehon'ilay lahatsoratra natolotra tamin'ny fanadinana kosa ny hoe “siantifika vendrana” (από έναν κακό επιστήμονα) ho solon'ilay “praiminisitra vendrana”. Ireo tanora mpiadina, dia tsy maintsy mandalo amin'ireny fanadinana nasionaly ireny mba hidirany eny amin'ny anjerimanontolo.
Naneho hevitra ny Kaomitin'ny Fanadinana Nasionaly hoe araka ny lalàna, azo atao ny manova ny lahatsoratra haroso amin'ny fanadinana ho an'ny taranja Teny Grika Maoderina, ary tsy vao izao no voalohany nisy fanovàna tahàka io. Nampian'ilay Kaomity fa afaka ahitsy ny lahatsoratra ary arafitra hifanaraka amin'ny haavom-pahaizan'ireo mpiadina. Rehefa alalinina tokoa dia nohazavaina ery amin'ny faran'ny famintinana ilay lahatsoratra nomena ireo mpiadina fa dika namboarina avy amin'ny lahatsoratr'i Theotokas io lahatsoratra io.
Samy rantsana ao anatin'ny Ministeran'ny Fanabeazana daholo ny Kaomitin'ny Fanadinana Nasionaly sy ny Fikambanana Mpikarakara ny Fanadinana Nasionaly, ary eo ambany fifehezan'ny governemanta tanteraka.
Inona no anton'ny fanovàna?
Miaraka amin'ny Praiminisitra avy amin'ny hery ankavia, nitontongana ny lazan'i Alexis Tsipras, tsy mahagaga araka izany raha nisy olona nahita fa tsara ny hanovàna izay fehezanteny hita fa tena hanimba. Fironan-kevitra iray hafa ny hoe amin'ny anaran'ny adin-tsaranga, nokatsahan'ireo mpitàna firehankevitra avy amin'ny elatra havia ny hanondrotra ireo mpandrafitra sy siantifika.
Tsara petraka ny fanamarihana avy amin'ny olona iray mpampiasa Twitter :
Rehefa manivana lahatsoratra iray an'i Theotokas ny Minisiteran'ny Fanabeazana avy amin'ny havia, satria fotsiny hoe tsy tiany ilay izy, dia azonao antsoina tsy misy fihambahambàna hoe “Minisitera Fasista misahana ny Fanabeazana”.
Elena Akrita, mpanao gazety malaza no sady mpanoratra boky tantara, dia nanoratra tao amin'ny Facebook:
Tsy tiako ireo “Tenin-jatovo” ampiasain'i Theotokas. Ho averiko hosoratana io.
Ireo ezaka fanivànana
Tsy vao voalohany izao ny governemanta no nijilajila nanao sivana. Tamin'ny 2016, ny governemanta niarahana nitantana, nahitàna ny antoko SYRIZA farany havia sy ny ANEL mpitahiry ny nentindrazana, dia niezaka hampandàny lalàna iray izay hanome alàlana ho anà fahitalavitra efatra monja ho afaka mandrakotra ny firenena, ao anaty firenena iray ahitàna vahoaka 10 tapitrisa. Ny niafaran'ilay lalàna dia voatsipaky ny Filankevi-Panjakàna.
Taorian'ilay andrana tsy nahomby saika hifehezana ny fahitalavitra, nanomboka ady masina iray indray ny SYRIZA hamelezana ireo tompona gazety. Nohararaotiny ny fahasahirànana ara-bola nanjo ny iray tamin'ireo fahitalavitra goavana indrindra tao Gresy, MEGA, sy ilay goavana amin'ny fanontàna, DOL, ka nahavitàn'ny governemanta nametraka fifanarahana iray miaraka amin'ny tompon'ireo toeram-piasàna roa ireo. Efa nàka sahady ny politika sy fomba fijery tsy manalavitra ny an'ny SYRIZA ireo gazety sy gazetiboky avoakan'ny DOL ary tsy atahorana ny milaza fa raha vao miverina misokatra ny MEGA, dia hiankina betsaka amin'ny antokon'i Tsipras.
Ny fanovàna fehezanteny iray avy ao amin'ny andrana nataon'i Theotokas dia mety fibolilàna kely fotsiny ihany. Na, mety ho singa kely amin'ny famakiana tsy miato ny fomba fitondran'ny SYRIZA amin'izao fotoana, mba hanatsaràny ny endriny efa tena simba sy hanamafisany ny fahefàny.